Ngaba iTorrelles, iFama entle yaseMaphandleni yaseRiudarenes
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEster
IFantastic Rural Farmhouse ikwidolophu yaseRiudarenes (Girona), apho unokuba namava amnandi okhenketho lwasemaphandleni, ngenxa yeembono zayo ezimangalisayo, ukuzola kwayo kunye nendawo yayo yangaphandle nangaphakathi.
I-Finca igcwele i-charm, enomthamo wabantu abayi-14-20. OKUBALULEKILEYO: KHANGELA IXABISO LENDAWO YOKUHLALA KUBANTU NGAPHEZU KWE-16!
- 6 amagumbi.
- 3 amagumbi okuhlambela agcweleyo
- 2 amagumbi okuhlala, 1 kubo kwakhona igumbi lokutyela.
- Ichibi langaphandle
- Ibarbecue yangaphandle
I-Finca ilungele iholide yosapho oluzolileyo, kumaqela amakhulu okanye ukuseta naluphi na uhlobo lomsitho (sibandakanya uMcwangcisi woMnyhadala okanye uMcwangcisi woMtshato ukulungiselela imicimbi nemitshato!).
Ungaphoswa lithuba lokonwabela iiCan Torrelles zethu ezimangalisayo! Sijonge ukukubona!
Can Torrelles ibekwe eLa Esparra, indawo yasemaphandleni ezolileyo kakhulu kumasipala waseRiudarenes, ilungele ukuphumla embindini wendalo, kunye nosapho kunye / okanye nabahlobo. Le ndawo inika umbono omangalisayo weentaba kunye namasimi, kwaye ukongeza, unokufikelela kumjelo weSanta Coloma de Farners ngokuthe ngqo, ngenxa yokufikelela ngasese esinakho ukusuka endlwini.
Umbuki zindwendwe ngu- Ester
Wamkelekile kwiCan Torrelles! NdinguEstere, kwaye ndiya kuqinisekisa ukuba wena nosapho lwakho nibe nexesha elimnandi! Ukongeza, ukuba ufuna inkonzo yoMbutho woMnyhadala, siya kubeka ulwazi lwethu kunye nababoneleli kuwe, ukuze yonke into ibonakale imnandi, kwaye imnandi kwaye intle. I-Finca ilungele imitshato, usapho kunye nemicimbi yeshishini, kunye nokubuyela kwi-yoga, njl. Siyawuthanda umsebenzi wethu!
Wamkelekile kwiCan Torrelles! NdinguEstere, kwaye ndiya kuqinisekisa ukuba wena nosapho lwakho nibe nexesha elimnandi! Ukongeza, ukuba ufuna inkonzo yoMbutho woMnyhadala, siya kube…
Inombolo yomthetho: HUTG-010072